Barcelona iyo Girona Oo Si Cad Loogu Diiday Inay Maraykanka Ku Wada Cayaaraan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Barcelona iyo Girona Oo Si Cad Loogu Diiday Inay Maraykanka Ku Wada Cayaaraan
(22-9-2018) Sida laga soo xigtay “Kobe” ee dalka Spain xidhiidhka kubada cagta ee dalka Spain uu hogaaminayo madaxweynahooda Luis Rubiales ayaa waxay go’aan kama dambeys ah ka gaareen codsiga ahaa in kulanka La Liga ee kooxaha Barcelona iyo Girona lagu ciyaaro magaalada Miami ee dalka USA.
Kooxaha Barcelona iyo Girona ayaa soo dhaweeyay go’aanka maamulka horyaalka La Liga ee dalka Spain ee ah in kulankooda lagu ciyaaro Miami, kaliya waxay sugayaan ogolaansho kaga timaada dhanka xidhiidhka kubada cagta ee dalka Spain, si ay u ciyaaraan kulanka ka tirsan kulamada 21-aad ee la ciyaari doono 26-ka bisha January ee soo aadan, kaasoo lasii qorsheeyay inuu ka qabsoono Hard Rock Stadium.
Codsiga ku saxiixnaa madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu, dhigiisa Girona Delfí Geli iyo madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee Javier Tebas ayaa la gudbiyay xili dambe ee maalinta Isniintii lasoo dhaafay.
Sida laga soo xigtey ilo isku mid ah jawaabta uu xidhiidhka kubada cagta ee dalka Spain ka bixin doono codsigan ayaa noqon doonta mid diidmo ah, adeegyada sharciga ah ayaana diyaariyay warqada loo diri doono maanta oo Jimco ah madaxweynaha maamulka horyaalka La Liga ee Javier Tebas, waxayna jawaabta noqon doontaa mid diidmo ah.
Dukumiintiga ayaa lagu xusay sidoo kale in Xidhiidhka Kubadda Cagta ee qaarada Yurub ee UEFA iyo sidoo kald xidhiidhka kubada cagta aduunka ee FIFA ay si weyn kaga soo hor jeesteen fikradan, halka xukuumada dalka Spain ay sidoo kale aysan taageera u muujinin arintan.